နက်ဆာကန် - ဝီကီပီးဒီးယား
22°25′N 31°45′E﻿ / ﻿22.417°N 31.750°E﻿ / 22.417; 31.750ကိုဩဒိနိတ်: 22°25′N 31°45′E﻿ / ﻿22.417°N 31.750°E﻿ / 22.417; 31.750
၅၅၀ km (၃၄၀ mi)
၃၅ km (၂၂ mi)
၅,၂၅၀ km2 (၂,၀၃၀ sq mi)
၂၅.၂ m (၈၃ ft)
၁၃၀ m (၄၃၀ ft)
၁၃၂ km3 (၃၂ cu mi)
၇,၈၄၄ km (၂၅,၇၃၅,၀၀၀ ft)
၁၈၃ m (၆၀၀ ft)
နက်ဆာကန် (အာရပ်: بحيرة ناصر‎ Boħēret Nāṣer, တမ်းပလိတ်:IPA-arz) သည် အီဂျစ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနှင့် ဆူဒန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည့် သဘာဝရေကန်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဤကန်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကြီးဆုံးလူလုပ်ရေကန်များထဲတွင် ပါဝင်သည်။  ဤကန်ကို တူးဖော်ခြင်းမပြုမီက ဆူဒန်နိုင်ငံတွင် ကန်တူးဖော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆန့်ကျင်မှုများ ကြုံခဲ့ရသည်။ ထိုသို့ ကြုံရခြင်းမှာ ထိုနြေ၏ မြောက်ဘက်တွင် နုဘီယန်လူမျိုးများသည်နေထိုင်သည့်အတွက် ဖြစ်သည်။ ထိုကန်ကို တူးဖော်လိုက်ပါက နုဘီယန်လူမျိုးများသည် ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့အခြေချရမည် ဖြစ်သည်။ နက်ဆာကန်အနီးရှိ ဆူဒန်၏ ကုန်းမြေများသည်လည်း များသောအားဖြင့် ရေလွှမ်းသည့်နေရာများ ဖြစ်သည်။
နက်ဆာကန်သည် ကန်တစ်ခုလုံးကြီး အကြီးမားဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည့် အီဂျစ်နိုင်ငံက ပိုင်ဆိုင်သည့် ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းကို ဆိုလိုသည်။ ဆူဒန်နိုင်ငံက ပိုင်ဆိုင်သည့် ရေပိုင်နက်အနည်းငယ်ကိုမူ "နုဘီယကန်" ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။
၃ အားကစားနှင့် ခရီးသွား
ကန်၏ အရှည်သည် ၄၇၉ ကီလိုမီတာခန့် (၂၉၈ မိုင်) နှင့် အကျယ်ဆုံးနေရာသည် ၁၆ ကီလိုမီတာ (၉.၉ မိုင်) ရှိသည်။ ကန်၏ မျက်နှာပြင်ဧရိယာသည် ၅၂၅၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၂၀၃၀ စတုရန်းမိုင်) ရှိသည်။ ရေသိုလှောင်နိုင်မှုသည် ၁၃၂ ကုဗမီတာ (၂၁ ကုဗမိုင်) ဖြစ်သည်။ 
ကန်ကို ၁၉၅၈ နှင့် ၁၉၇၀ အကြားတွင် နိုင်းမြစ်၏ ရေကို Aswam ဆည် တည်ဆောက်ရာမှ ဤကန်သည် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကန်၏ အမည်ကို ၁၉၅၂ ခုနှစ် အီဂျစ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနှင့် အီဂျစ်၏ ဒုတိယမြောက်သမ္မတဖြစ်သည့် ၏ အမည်ဖြစ်သည့် Gamal Abdel Nasser ကို အစွဲပြုကာ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ သူသည်ပင် မြင့်မားသည့် ဤဆည်စီမံကိန်းကို စတင်ခဲ့သည်။ သမ္မတ Anwar Sadat သည် ကန်နှင့် ဆည်ကို ၁၉၇၁ တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
အီဂျစ်သည် ၎င်း၏ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် လျှပ်စစ်အတွက် ရေလိုအပ်လျက်ရှိသည်။ အီသီယိုပီးယားတွင် လက်ရှိတည်ဆောက်လျက်ရှိသည့် Grand Ethiopian Renaissance ဆည် သည် ရေကို ထိခိုက်မှု ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထိုဆည်သည် အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံအတွက် ကအျိုးရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း အီဂျစ်၊ ဆူဒန်နှင့် အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံများအကြား တင်းမာမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အီဂျစ်နိုင်ငံက ထိုဆည်အသစ်တည်ဆောက်မှုကြောင့် နိုင်းမြစ်မှရေသည် နက်ဆာကန်သို့ စီးဝင်မှုရပ်တန့်သွာမည်ကို ဖြစ်သည်။ နက်ဆာကန်မှရေဖြင့် လျှပ်စစ်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး ကန်အတွင်းသို့ ရေစီးဝင်မှုလျော့နည်းခြင်းသည် ကန်၏ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေမည် ဖြစ်သည်။ ကန်တွင် ရေစုပ်တင်သည့်နေရာများစွာရှိသည်။ လက်ရှိတွင် ဤစီမံကိန်းသည် အီဂျစ်လူမျိုးများသို့ တစ်နှစ်လျှင် ရေအားလျှပ်စစ်စွမ်းအား တစ်နာရီလျှင် ၁၀ ဘီလီယံကီလိုဝပ်ကို ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
ဤကန်တွင် ကမ်းခြေမှသော်လည်းကောင်း လှေဖြင့်သော်လည်းကောင်း Nile perch ငါးများကို ငါးမျှားခြင်းသည် အထူးလူသိများသည်။ ကန်၏ ရေသည်ပြည့်သွားသည့်အခါတွင် ရှေးအခါက အီဂျစ်လူမျိုးတို့သည် ကန်၏ ရေမျက်နှာပြင်အထပ် မြင့်မားသည့် နေရာများတွင် နေရာပြောင်းရွှေ့ကာ နေထိုင်ကြသည်။ သို့သော်လည်း အချို့သည်လည်း နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်း မရှိဘဲနေထိုင်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရှေးခေတ်အီဂျစ်လူမျိုးများဖြစ်ကြသည့် Buhen တို့သည် ခံတပ်အကြီးကြီးများတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ထိုအရာတို့သည် ယခုအခါ ရေအောက်သို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ Abu Simbel ရှိသည့် ကျောင်းတော်များကိုလည်း နေရာပြန်ချထားခဲ့ရသည်။ Abu Simbel သည် အီဂျစ်နိုင်ငံရှိ ရှေးဟောင်းနေရာများထဲတွင် အထင်ကရနေရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ နက်ဆာရေကန်တွင် လှေစီးခြင်းများလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ လှေစီးကာ အဆောက်အဦများ, ကျောင်းတော်များကို နက်ဆာကန်တစ်လျှောက် လေ့လာနိုင်သည်။ Abu Simbel ရှိ ကျောင်းတော်များကို လေ့လာခြင်းသည် ကန်သို့လာရောက်သည့် ခရီးသွားများ၏ မရှိမဖြစ် အရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။
360 Degree Panorama of Lake Nassar Archived 1 February 2014 at the Wayback Machine.
↑ Lake Nasser။ 25 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Aswan High Dam, River Nile, Sudan, Egypt။
↑ Scudder၊ Thayer (September 2, 2016)။ Aswan High Dam Resettlement of Egyptian Nubians။ Springer။ ISBN 9789811019357။ 18 November 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sofer၊ Amon (1999)။ Rivers of Fire: The Conflict Over Water in the Middle East။ Rowman & Littlefield။ p. 36။ ISBN 9780847685110။
↑ Governorates of Egypt။
↑ Roest၊ F.C.; Crul၊ R. C. M. (1995)။ Current Status of Fisheries and Fish Stocks of the Four Largest African Reservoirs: Kainji, Kariba, Nasser/Nubia and Volta။ Food & Agriculture Org.။ p. 81။ ISBN 9789251036839။
↑ "Estimation of Reservoir Discharges from Lake Nasser and Roseires Reservoir in the Nile Basin Using Satellite Altimetry and Imagery Data" (August 13, 2014). Remote Sensing6(8). doi:10.3390/rs6087522. Bibcode: 2014RemS....6.7522M.
↑ Life-Giving Nile River (Aswan Dam, Egypt) (2012-12-20)။
↑ Encyclopedia of Architectural and Engineering Feats။ ABC-CLIO။ 2001။ p. 23။ ISBN 9781576071120။ president nasser, high dam project.
↑ "Egyptian agriculture crisis worsens, mainly due to lack of water"၊ September 27, 2016။
↑ "Water Politics - Sharing the Nile"၊ The Economist၊ January 16, 2016။
↑ Life-Giving Nile (2012-12-20)။
↑ Nile Perch Fishing on Lake Nasser။
↑ "Egyptology fellowship chairman shares giant fish story" (2002). The Rotarian 180 (6).
↑ Gohary၊ Jocelyn (1998)။ Guide to the Nubian monuments on Lake Nasser။ American University in Cairo Press။ ISBN 9789774244629။ 15 October 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Rescuing Abu Simbel"၊ The New York Times၊ November 4, 1963။
↑ "Restored Abu Simbel Keeps Ancient Grandeur"၊ The New York Times၊ October 10, 1967။
↑ Maroon၊ Fred J.; Newby၊ Percy Howard (1979)။ The Egypt story: Its art, its monuments, its people, its history။ Chanticleer Press Edition။ p. 42။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နက်ဆာကန်&oldid=665522" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၁၁:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။